I-China I-Automagnetic electromagnetic/igesi yokufudumeza i-Multi-shaft stir-fryer/cooker abavelisi kunye nababoneleli |INCHOI
Ukufudumeza kwe-electromagnetic/gesi ye-Automatic Multi-shaft stir-fryer/cooker
Iimpawu zokuSebenza:1. I-automatic multi-shaft ivuselela kunye ne-frying (ama-blades avuselelayo angajikeleza kwaye ajikeleze);2. Kulula ukusebenza (umzimba we-pan unokuthambeka, kwaye izinto eziphathekayo zithululelwa ngamandla ombane);3. Ixesha elilungileyo lokuqhotsa;4. Gxuma/xuba ngokufanayo;5. Ukufudumeza kwe-electromagnetic kukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo, ukonga umbane xa kuthelekiswa nokufudumeza kombane okuqhelekileyo I-oyile yokufudumeza, ukufudumeza ngokukhawuleza, kwaye ubushushu buyalawuleka;6. I-pan yangaphakathi nangaphandle yenziwe ngensimbi engenasici, inhle ngokubonakala, i-compact kwisakhiwo kwaye kulula ukuyicoca.
Kufanelekile ukupheka kunye nokuthosa kwemifuno eyahlukeneyo, inyama yentlanzi, i-condiments, izinto zonyango kunye nezinye izinto.Isetyenziswa kakhulu ekuphekeni, ekusetyenzweni kokutya, kwimveliso yamayeza, kwiimveliso eziqhotsiweyo, ekusetyenzweni kwe-condiment, ukutya kwe-snack, ukubhaka kunye namanye amashishini.Inokusetyenziswa kwakhona kwi-ketchup.Ukuqhotswa kweemveliso ze-viscosity ephezulu ezifana nesosi yenkomo kunye nempahla yembiza eshushu sisixhobo esilungileyo sokulungiswa kokutya ukuphucula umgangatho, ukunciphisa ixesha, kunye nokuphucula iimeko zokusebenza.
Ukufudumeza kukhawuleza, kwaye iqondo lokushisa lihlengahlengiswa;kukho iiprobe ezimbini zobushushu embizeni ukulinganisa ubushushu bomzimba wembiza kunye nobushushu bokutya ngokulandelelanayo.
I-microcomputer echanekileyo yokulawula ubushushu obuzenzekelayo kunye nomboniso weqondo lokushisa, ukuseta ngokuzenzekelayo, i-alamu ngokuzenzekelayo xa ixesha okanye ukushisa kufikeleleke, iteknoloji yokucubungula kulula ukuyilawula, inkqubo yokucubungula ukutya inokuphindaphinda okulungileyo, umgangatho ongcono, kunye nokuzinza ngakumbi;
Ngenxa yokuba iplanethi yokuvuselela isetyenzisiweyo, ukutya okucutshungulwayo akuyi kubambelela epanini, kwaye akuyi kubumba izibonda okanye i-coke;isebenzisa ioli encinci kwaye kulula ukuyisebenzisa.Iintsalela kwinkqubo yokucoca akulula ukunamathela epanini kwaye kulula ukuyicoca.
Isipheki sokuqhotsa izinto ezininzi sisebenzisa ukufudumeza kwe-electromagnetic njengomthombo wobushushu (ukufudumeza kwegesi nako kungasetyenziswa).I-multi-stir eshukumisayo yokupheka i-cooker ineempawu zendawo enkulu yokufudumeza, ukusebenza kakuhle kwe-thermal, ukufudumeza okufanayo, ixesha elifutshane lokubilisa ulwelo, kunye nolawulo olulula lobushushu bokufudumala.Umzimba wembiza yangaphakathi (imbiza yangaphakathi) yenziwe ngensimbi engenasici, exhotywe nge-tetrafluoroethylene scraper, iSchneider PLC.Inkangeleko entle, ukufakwa lula, ukusebenza ngokufanelekileyo, okukhuselekileyo nokuthembekileyo.
Lo matshini uphela unetekhnoloji ye-welding egqwesileyo, i-welding engenamthungo, ukuthungwa okucacileyo, akukho zithuba, kunye nenkangeleko entle yemveliso.
Inkqubo yokuxuba iplanethi ye-multi-head multi-stir, usebenzisa ukudibanisa i-revolution kunye nokujikeleza, izinto eziphathekayo zixutywe kwaye zifudumala ngokulinganayo.I-bottom of the pot is scraped kwaye igxininiswe kwii-degrees ezingama-360 ngaphandle kweephelo ezifileyo ukuphucula umbala kunye nokunambitha kwezinto.
Umzimba wembiza yangaphakathi nangaphandle kunye neendawo zoqhagamshelwano ezingaphezulu zezixhobo zenziwe nge-304 yensimbi engenasici, ekulula ukuyicoca kwaye ihlangabezana neemfuno zokucoceka kokutya.
I-blade yokuvuselela eyilwe kunye ne-blade evuselelayo yenziwe nge-PTFE ephezulu, i-heaters-resistant kunye ne-high-temperature resistant, non-toxic, kwaye ihlangabezana neemfuno zemveliso yokutya.
I-scraper inezinga eliphezulu lokubambelela kumzimba webhodwe, kwaye i-bottom scraping icokisekileyo ngakumbi, kwaye i-pot sticking phenomenon ayilula ukuba yenzeke.
Ukuxhotyiswa nge-burner ekhethekileyo yokugcina amandla, ukutsha okupheleleyo, ukusebenza kakuhle kwe-thermal, ukugcinwa kwamandla kunye nokukhuselwa kwendalo, kunye nezixhobo zokugquma ukushisa, sebenzisa ukugcinwa kwamandla amaninzi, ukusebenza kakuhle kunokufikelela ngaphezu kwe-70%.
Ngaphambili: Umphunga/igesi/yombane/imagnethi yokufudumeza iPlanethi yokuvukuza-umpheki/ifryer
Okulandelayo: Umphunga kunye ne-AIR RETORT
Umatshini wokuxuba uMpheki
I-Tefal Multi Cooker kunye ne-String
umatshini wokutshayela i-tumbler yenyama
Isahluli samathambo eentlanzi
Umphunga/igesi/isicwangciso sokufudumeza sombane/sombane...
INYAMA BOWL CUTTER & chopper